imwechete mubato wekugezera singi pombi chrome
musha / Mabheji ekugezera / Imwechete Yakabata Bathroom Faucets / WOWOW Chrome Yakakwira Arc Yekugezera Faucet
Iine mitsara yayo yakakwenenzverwa uye yaisanganisira kupedzisa pop-up drain musangano, ino yega gomba rekunyura sofa faucet ndeyekuwedzera kukuru kune chero nzvimbo.
Kutozombopera basa kuzere: sirivha bheseni faucet 2321501C pagirazi-senge chrome magumo, kusavimbika dhizaini iyo inonyanya kufadza, uye isu patemhando nhatu-curve yekugadzira iyo yakasarudzika, gadzira imba yako yekushambidzika yakawanda.
2321501C yekumisikidza mirairo
Bathroom faucet imwe kubata 2321501C
Kutsvaga yakashongedzwa imba yekugezera faucet imwechete gadziriso yakagadzirwa nendarira yakasimba? Tarisa kwete kumberi! WOWOW yagadzira yakasarudzika yekugezera faucet mubato mumwe chete, iyo inopa yakashongedzwa twist kune chero yekugezera décor. Vagadziri veWOWOW vanogara vachitsvaga nzira nyowani dzekupa chaiyo kubata pamwe neyekugezera faucets yayo. Iyi yekugezera pombi yekugezera imwe inoratidzira yakasarudzika tripe-yakakomberedzwa dhizaini. Iwe hausi kuzoona dhizaini iyi kumwe uye zvechokwadi iwe uchatenga faini yekugezera inova imwe yemhando. Iyi US-patents yakapetwa katatu-yakavharidzirwa dhizaini inochinja chero imba yenguva dzose yekugezera inonyura mune yakakwirira yekugezera kunyura. Pasina kupokana!
Paunogadzira patsva kana kurongedza imba yako yekugezera, unogona kuda kupa hanya chaizvo kune yako yekugezera faikisi. Kazhinji mabheseni ekugezesa anongosarudzwa panoperera chirongwa kana miganhu yebhajeti yave kutosvika (kana kutopfuurwa). Mune ino kesi, iwe unofanirwa kudzivirira kuti yako yekugezera dhizaini inoparara nekuda kwesarudzo dzakaipa nezve yako yekugezesa faucet. WOWOW inoratidzira kazhinji uye zvakare kuti yakakwirira-mhando yekugezera faizets inogona kuuya nemutengo unodhura. Uye ichine hukuru hwekugadzira iyo inowedzera yakanakisa, yakasarudzika, uye / kana yemazuva ano kubata kune yako yekugezera dhizaini. KuWOWOW tine chokwadi chekuti tinopa kukosha kwakanyanya kwemari iwe yaunogona kuwana.
Bathroom faucet mubato mumwe chete neiyo yakakosha kukosha yemari
Hunhu hwekugezera faucet mubato mumwe weWOWOW hauna kusimbiswa. Yayo yakasimba simbi zvinhu zvinopa kureba kwenguva refu pakuita kwepamusoro. Iwe unozoona izvi kana iwe uine WOWOW yekugezera faucet mubato mumwe chete mumaoko ako. Iyi ndeimwe ligi ichienzaniswa neinodhura yekugezera yaungawana mumusika. WOWOW kune rumwe rutivi haina kupfuma pane zvigadzirwa zvachose, kuisa njodzi yekukanganisa kunaka kweyekufaira kwayo yekugezera. Uye zvakadaro, WOWOW yekugezera faucet mubato mumwe inobhadharwa zvakanyanya. Isu, saka, tinogona kutaura kuti iwe hausi kuzowana kukosha kuri nani pamari. Nekuda kweizvozvo, tinokupa iwe 90-day-mari-yekudzosera garandi. Kana iwe ukazowana faucet yekugezera yakafanana nemutengo wakaderera, kana nani-yemhando yepamusoro faucet pamutengo mumwe chete, isu tinokupa iwe wakazara mari. Pasina mibvunzo yakabvunzwa.
Iyo yakakwira arc spout inoratidzira mvura-yekuchengetedza aerator. Iyi yepamusoro-inoshanda Neoperl Aerator inopa rakapfava uye nyoro kuyerera kwemvura kuyerera kwakakwana. Haufanire kunetseka nezve kupaza mvura. Chimwe chinobatsira ndechekuti iwe unogona kuchengetedza kusvika pamakumi mashanu muzana emvura nechinhu ichi chitsva cheimba yekugezera faucet mubato mumwe weWOWOW. Iwe unokwanisa kubvisa iyi aerator zviri nyore, uchishandisa iyo (inosanganisirwa) chishandiso. Nenzira iyi unogona kuchenesa aerator kazhinji, kubvisa zvakaoma masara, kukupa iwe yakanakisa mushandisi ruzivo.
Yakanyanya-yakaedzwa imba yekugezera faucet imwe mubato
Izvo zvikamu zveimba yekugezera faucet mubato mumwe wakaedzwa kakawanda kuti ikupe iwe kuita kwakanaka kwazvo. Iyo ceramic vheti semuenzaniso yakaedzwa kanopfuura mazana mashanu ezviuru. Uye zvakadaro, mushure meedzo dzese idzi, vharafu yakaramba ichishanda mushe, isina kudonha, uye isina-kubhururuka. Imba yakapfava ingangoshandisa bheji yokugezera isingasviki zviuru gumi pagore. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa ino yekugezera faucet mubato mumwe kwemakore akawanda, usingarasikirwe nemazvo kushanda kwayo.
KuWOWOW tinovimba nemhando uye maitiro eimba yedu yekugezera faucet imwe mubato. Nekuda kweizvozvo, isu hatitye kukupa iwe-yemakore matatu waranti nguva. Kana imba yekugezera faucet imwe mubato isinganyatsoita zvakanaka mukati memakore matatu aya, isu tichadzosera yako yekugezera faucet mubato mumwe newaki nyowani. Nenzira iyi, iwe unovimbiswa nezvekuenderera mberi kwekuita kwekugezera kwako kunyura faucet. Isu tinotora basa redu zvakanyanya uye tinoritora pasina mubvunzo. Kwete pasina chinhu isu tine boka rinokurumidza kukura revatengi vakavimbika kubva pasi rese.
Mushandisi-ushamwari imba yekugezera faucet imwe mubato
Inoyerera mvura uye tembiricha yayo inogona kudzorwa zviri nyore neipi imwechete yeipi yekugezera iyi. Iwe unogona kubata tembiricha yemvura neruoko rumwe chete, iwe uchine rumwe ruoko rwako kubatwa, semuenzaniso kana uchitsvaga mazino ako. Iwe unozoona kutapira kwekushanda pakarepo paunoshandisa iyi yepamusoro-soro valve. Izvo zvichave zvinofadza nguva dzese kushandisa ichi chigoni.
Iyo chrome yekugezera faucet imwechete kubata chrome yeWOWOW inouya neinosanganisira pop-up kumira nekufashukira. Ino pop-up Stopper inoumba kubatana kumwe neyekugezera chako faucet mubato mumwe, kuti uite zvakanyanya kukura mune yako kicheni décor. Ino pop-up drain yekumisa inokwanisa kuvhiya nyore nyore nekushandisa kamwe chete purinda. Izvo zvinongoda a
zvishoma zvekumanikidza kuti ushande. Nekuda kwekugadzirwa kwayo, inokwanisa kubvisa mvura kubva kubathiro rako kunyura nekuchinyarara.
Kuisirwa kit yekugezera faucet imwe mubato
Nekuda kwekushandiswa kwechinhu chakasimba chendarira, WOWOW inogona kuvimbisa kutungamira-isina mvura yekupa mvura. Nenzira iyi, iwe unogona kupa mhuri yako ruzivo rwakachengeteka rwemvura uye haufanirwe kunetseka nezve kunaka kwemvura. Zvirinani kwete nekuti yako yokugezera faucet. Uye nekuda kwekuqina kwayo, WOWOW yekugezera faucet mubato mumwe unogona kuvimbisa ichi chiitiko kwemakore mazhinji.
Chinhu chikuru cheimba yekugezera faucet mubato mumwe weWOWOW ndechekuti iwe unogona kuzvimisa iwe pachako pasina kuhaya pombi. Iyi yokugezera faucet mubato mumwe wakagadzirwa zvakasiyana kubva kune imwe yekugezera faizets uye inogona kuiswa mumaminitsi makumi matatu chete. Kunyangwe iwe usiri nyanzvi. Iyo yekugezera faucet imwe mubato weWOWOW inouya neye yakazara kit yemidziyo inovimbisa iyo yekuisa yakatsetseka yekuisa: 30-inch dhiza dhiza (iyo inofanana ne 4- uye 1-gomba rakarongedzwa imba yekugezera inonyura), chrome pop-up dhure, 3-inch inopikisa Tucai mvura hose ine yakasimbiswa mhando, kuisa magurovhosi, aerator kubvisa chishandiso, nezvimwe. Nenzira iyi, zviri nyore kuita-iwe-iwe pachako gadzira WOWOW yekugezera faucet mubato mumwe.
Zvakanakira imba yekugezera faucet mubato mumwe muchidimbu:
 Yakanyanya kukosha yemari
 Iko kushanda kwakapfava kwekuyerera kwemvura
 Yakasarudzika uye yakagadzirwa dhizaini
 Zvigadzirwa zvekushandisa zvepamusoro
 Inosanganisira ita-it-pachako yekuisa kit
SKU: 2321501C Categories: Mabheji ekugezera, Imwechete Yakabata Bathroom Faucets Tags: apedza kupukutwa, laucator pombi, Single Handle
Item Package Wakawanda
Kuruboshwe / Kurudyi / Center
Kudzora kwemvura tembiricha
White Square Basin Musanganiswa Mapombi
Yakapararira 2-Handle Yakakwira-Arc Bathroom Faucet Ch ...
WOWOW Bathroom Sink faucet Yakafuridzirwa Nickel Wides ...
TAURA NESU E-mail: sale@wowowfaucet.com
Usazvipotse: Tenga 1 Tora 1 Pane 10% Kubva Dzinga